The Bridgertons - Fotoana Faharoa Voamarina. Bezzia
Ny Bridgertons: Voamarina ny vanim-potoana faharoa!
Susana godoy | 27/04/2021 14:00 | ankehitriny
Ny Bridgertons dia iray amin'ireo fahombiazana lehibe nanakatona ny taona 2020. Ny vanim-potoana voalohany dia natomboka tamin'ny Krismasy tamin'ny taona voalaza teo aloha, volana maromaro taty aoriana dia mbola miresaka momba ny teti-dratsy sy ny mpilalao fototra ao aminy ny olona. Noho izany, taorian'ny fahombiazana lehibe tamin'ity vanim-potoana ity dia azo natao ihany ny niandry ny fizarana faharoa.
Mazava ho azy fa antenaina rehefa naneho hevitra tsara isika, fa ny angamba tsy tena tiantsika loatra ny ankamaroany dia izany Ny Duke of Hastings dia tsy ho ao amin'ny vanim-potoana faharoa nandrasana hatry ny ela. Eny, izy io dia iray amin'ny sokay ary iray hafa amin'ny fasika, ka tsy mbola fantatsika hoe ahoana izany rehetra izany eo amin'ny fahombiazan'ny tapany faharoa, izay efa nanomboka nitifitra.
1 Ahoana ny fizaran-taona faharoa amin'ny andiany Netflix
2 Rahoviana no hivoaka i Bridgerton fizarana 2?
3 Tarehy vaovao ao amin'ny The Bridgerton?
4 Veloma ny Duke
Ahoana ny fizaran-taona faharoa amin'ny andiany Netflix
Raha tsy mandeha any amin'ny mpanimba, dia mazava fa ny iray amin'ireo fehin-kibo fototra nahatonga antsika ho tia ny vanim-potoana voalohany dia ny tantaram-pitiavana. Ny Duke sy Daphne dia raiki-pitia tanteraka ary nandatsaka sakana sasany mba hiarahana.. Niatrika olana maromaro izy ireo, ka anisan'izany ny fiterahana. Saingy tsy handroso zavatra hafa isika, ho an'ireo rehetra mbola tsy nahita an'io.
Amin'izao fotoana izao, isika izay nanao izany dia tsy maintsy nahazo tombony tamin'ny fahalalana ny fomba hitohizan'ity tantara mahafinaritra ity, saingy toa tsy ho toy izany. Ny vanim-potoana vaovao dia tsy fitohizan'ny voalohany, fa izao dia hifantoka amin'ny mpikambana Bridgerton iray hafa ary izy no zokiny. Satria fantatrao tsara fa mifandray amin'ny boky izy ireo. Noho izany, ho hitantsika ny fomba fampifanarahana ataontsika mba tsy hisentoan'ny zanany vavy Daphne ary ny mifamadika amin'izany. Toa handray izany andraikitra izany i Anthony ary hampifaly antsika amin'ny fitiavana vaovao sy tantara vaovao na tsiambaratelo.
Rahoviana no hivoaka i Bridgerton fizarana 2?
Mbola aloha loatra ny miresaka momba ny fotoana hivoahan'ny The Bridgerton vanim-potoana 2. Hatramin'ny nanombohany ny fakana sary azy io tamin'ny lohataona. Fantatsika fa manahirana indraindray ny mitifitra ny tantaran'ity kaliber ity, satria izay azo antoka fa hatramin'ny faran'ity taona 2021 ity na angamba ny fiandohan'ny 2022 dia tsy hanana ny vaovao tsara isika eo anelanelan'ny tanantsika. Eny, antenaina fatratra fa izany dia hanome fotoana antsika handevonana fa ny iray amin'ireo mpilalao fototra dia tsy ho amin'ilay horonantsary voalaza intsony na amin'ny famoahana azy ho avy.
Tarehy vaovao ao amin'ny The Bridgerton?
Toy ny fiainana ihany izany, misy ny miala ary ny hafa tonga am-kery. Eny, ao amin'ny The Bridgertons dia tsy ho hafa koa izany. Na dia, Tsy ao anaty mpilalao i Regé Jean-Page, tonga i Simon Ashley. Toa izany no ho fitiavana vaovao an'i Anthony, izany hoe ny lahimatoan'ny fianakaviana. Mazava ho azy, toa niverina niaraka tamin'ny fihetsem-po sy tantaram-pitiavana ary koa tanjaka ny tantara. Fa marina fa ny tantara an-tsehatra koa dia manakaiky tsy mbola nisy toy izany. Fifangaroana mipoaka mihoatra ny explosive izay mahatonga antsika haniry bebe kokoa ho an'ny topy maso kely. Heverina fa ny sisa amin'ny tarehin-tsoratra, ny fianakaviana be fitiavana indrindra, dia hitohy miaraka amintsika mandritra ny vanim-potoana iray hafa. Fa marina fa raha azo antoka tanteraka dia mbola mila miandry foana isika.
Veloma ny Duke
Eny, manizingizina be izahay, saingy izy no tena mpandray anjara ary satria tsy matetika izany amin'ny andiany mahomby, nitodika tany amin'ilay mpilalao ilay tambajotra sosialy. Noho izany, tao amin'ny Instagram dia hitantsika ny nanaovan'ny Duke tenany veloma ny fahombiazany lehibe, hatreto. Toa fotoana iray ihany no nanaovany sonia ary toy izany dia tsy hanohy handray anjara izy, fa kosa manana teny tsara foana ho an'ireo mpiara-miasa aminy sy noho ny asa lehibe izay nanome azy fankasitrahana iraisam-pirenena. Te ho amin'ny vanim-potoana faharoa ve ianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » ankehitriny » Ny Bridgertons: Voamarina ny vanim-potoana faharoa!
Ahoana ny fomba hanaovana ny laharana Dumbbell amin'ny fomba marina